टिम कहाँ चुक्यो ? – onlinekhelkhabar.com
टिम कहाँ चुक्यो ?
सलमान शाह	Posted on १२ श्रावण,२०७६
शलमान शाह (अनलाइन खेलखबर ) || सिगांपुरमा सम्पन्न आईसीसी टि- ट्वान्टी विश्वकप एसिया फाइनल छनोट प्रतियोगितामा दाबेदार मध्यको एक नेपाल चुक्न पुगेको छ ।
प्रतियोगिता हुनुअघि नेपाल छनोट हुँने आकंलन गरिएको थियो । कुल ५ राष्टको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताको शीर्षस्थानमा रहने एक टिम विश्वकपको अघिल्लो अन्तिम यात्रा स्वरूप रहेको ग्लोबल क्वालिफायरमा स्थान बनाउँने थियो ।
सोहि हिसाबले नेपाललाई प्रबल रुपमा हेरिएको थियो । तर यसमा मलेसिया र सिगांपुरले भने टक्कर दिने टिमको रुपमा हेरिएको भएपनि अन्तत : नेपालनै छनोट हुँने धेरै आधारहरु रहेका थिए ।
यो कुरा क्रिकेट विश्लेषक,क्रिकेटका जानकार देखि समर्थकहरुमा लागेको थियो , स्वयम् खेलाडीहरुको मनोबृतिमा समेत यो कुरा प्रष्ट देखिएको थियो । कि नेपाल यो प्रतियोगितामा बलियो टिम हो र छनोट हुनेछ ।
तर यहाँ सबैको आकंलन अहिले आएर फेल खान पुगेको छ । सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको विश्वकपमा पहिलो पटक सहभागिता जनाउंदै विश्व क्रिकेटमा नेपाली क्रिकेटलाई अझ प्रभाव पार्न सफल नेपालले सन् २०१६ मा भारतमा भएको विश्वकप खेल्नबाट चुक्यो ।
यसपछी पुन : नेपाल एकपटक फेरी विश्वकप खेल्ने लक्ष्यका साथ् सिगांपुर पुगेको थियो । पछिल्लो समय एक पछि अर्को सफलता हात पारेको नेपालीटोलीको विश्वाश प्रति सबैले साथ दिईरहेका थिए ।
जुन स्वाभाविक समेत हो । नतिजा राम्रो गरिरहेको टिम माथि अबिश्वास गर्ने कुरा पनि भएन त्यसैले यसपटक विश्वकपमा नेपालको झन्डा पुन : फर-फराउँनेमा धेरै आशावादी समेत रहेका थिए ।
विश्वकपको पहिलो खुड्किलो पूर्वी छनोट प्रतियोगिताको च्याम्पियन हुँदै दोस्रो खुड्किलो एसिया फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना अहिले आएर पूर्णविराम लागेको छ ।
फोटो : रमन सिवाकोटी ।।
खेल हो सधै नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्छ भन्ने हुँदैन। सदैभ एकैकिसिमको पनि हुँदैन । कहिले काही राम्रो गर्दा गर्दै नतिजा आफ्नो पक्षमा पर्न सक्दैन , जसको पछिल्लो उदारण मलेसियामा भएको अन्डर नाईण्टिन विश्वकप छनोटनै रहेको छ |
नेपालले निकै राम्रो गर्दा गर्दै एक खेल जुन बर्षाले गर्दा डिएल मेथडमा युएईसँग १ रनले पराजित भएसगै अन्तत युएईले विश्वकपको यात्रा तय गरेको थियो ।
जसमा खेलाडीले छनोट नभएपनि सबैको मन भने जितेका थिए । तर यसपटक सिनियर टिममा त्यो कुरा लागु भएन । सदैभ टिमले जित्छ भन्ने हुदैन कहिले काही अप्त्यारिदो नतिजा आउँछ अझ क्रिकेटमा धेरै आउँछ ।
नेपाली क्रिकेटका सुभचिन्तकले नेपालको क्षमता अनुसारको यसपटक बिशेष आशा राखेका थिए । जुन हेर्ने हो भने सामान्य लाग्छ । भखरै एकदिवसीय मान्यता पाएको नेपाल त्यसमाथि लयमा समेत रहेको थियो ।
त्यो आशा स्वाभाविक समेत हो । नेपालको क्षमता हेरेर नै आशा गरेका हुँन । जहाँ आशा देखिन्छ त्यहा सपना बुन्न थालिन्छ । त्यसैले धेरैनै सपना देखेका थिए | यसपटक त् …… नेपाल खेल्छ ।
तर सबै सपना कहाँ पूरा हुदाँ रहेछन र सिगांपुरले झस्ल्याङ्ग बनाईदिएको छ । सिगांपुरले प्रतितोगीतामा राम्रो गर्यो अझ विशेष त आइतबार प्रतियोगिताको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा खास प्रदर्शन गर्यो ।
दबाब बिना टस जितेर सुरुमा ब्याटिग गरेको सिगांपुरले कीर्तिमानी ब्याटिङ् गर्दै नेपालसामु बिशाल लक्ष्यको पहाड निर्माण गर्ने क्रममा १ सय ९१ रनको बिशाल योगफल खडा गर्यो ।
त्यस्तोमा बिशाल लक्ष्य त्यो पनि निकै महत्वपूर्ण खेल जसले आगामी यात्राको भाग्य निर्धारण गर्दै थियो । त्यसमा नेपाल पूर्णरुपमा चुक्यो मा सिमित रहेन सिगांपुरसगँ लज्जापद हार व्यहोर्न बाध्य भयो ।
टि- ट्वान्टी क्रिकेटमा ८२ रनको अन्तर धेरै ठुलो हुन्छ । सिगांपुर यस्तो भएंगकर शक्तिशाली टिम पनि थिएँन । यो आफैमा सोचनीय पार्ने खेल बनेको छ ।
महत्वपूर्ण यस खेलमा टिमले जितेन , त्यो एक बाटो हो । यसबाट नेपाली क्रिकेटको अबस्थालाई गतिलो झापड भने पक्कै मिलेको छ । यसअघि नेपालको बलियो पक्ष के हो ? भन्दा बलिङ् भन्ने उत्तर सुनिन्थ्यो होला अब त्यो कुरा रहेन । अब भन्नुहोला आज एक खेलमा भयो भनेर सधै यस्तै हुन्छ त ? तर कडा मनले भन्ने हो भने बलिङ पक्षले खेललाई जिताउने तागत राख्ने बलिङ पक्षको यसपटक प्रतियोगितामा औशत प्रदर्शन रहन पुग्यो ।
यहि निर नेपाल चुक्न पुगेको छ । सबैले भन्लान ब्याटिङ् निकै कमजोर रहयो , कमै यस्ता उदारण होलान , ब्याटिङको मद्दतमा नेपालले जित्ने गरेको यसो भनिरहदा नेपालको ब्याटिङ् खत्तमनै छ त् ! खत्तम त होईन कमजोर भने देखिदै आएको हो ।
यसलाई एकपटक पुन : खेलाडीले सावित गरेका छन। | यसविचमा सकारात्मक कुरा पनि नभएका होईनन । छन तर कम , केहि अनुभवी खेलाडीहरुले राम्रो कमब्याक गरे । त्यो आगामी दिनमा टिमका लागि सहज पक्कै हुनेछ । ज्ञानेन्द्र मल्लले आफुलाई न्याय गरेका छन ।
त्यो नेपाली क्रिकेटका लागि राम्रो संङ्गकेत् हो । भने नेपालका एक म्यान आर्मी पारसको प्रदशन पनि राम्रो रह्यो । भन्ने बितिकै पारस हो यहिनै हुँदै आएको छ ।
पारस आउट भए नेपालको खेलनै तलमाथि हुँने हुन्छ । त्यसको ताजा ताजा सिगांपुरसँगको खेलमा पनि देखियो । उनि आउट भएपछी नेपालको विकेट जाने क्रम रोकिएन मात्र खेलाडीले आतिएको महसुश हुन्थ्यो ।
प्रति ओभरका साथ् खेल्नु पर्ने अबस्थामा नेपाली ब्याट्सम्यानले दबाब महसुश गरेको , र सोहि रणनीतिमा खरो उत्रिनखोज्दा झन् पछी झन् नेपाल फसेको भनिन्छ भने अर्का थरी नेपालको यो स्वाभाविक ब्याटिङ् नै हो भन्ने गर्छन ।
नेपालको यहि हुँदै आएको हुँदा आजपनि यहिनै हुने आकलन मिलेको भन्नेहरु नभएका होईनन । यदि आज नेपालीबलरले सिगांपुरलाई १४०/४५ भित्र रोक्न सकेको भए भने नेपालको ब्याटिगले भेटने थियो ।
खैर ! हारेको अबस्थामा यस्ता धेरै कुरा उठ्ने गर्छन , यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो यस्तो भए उस्तो हुन्थो । जुन मानव प्रजातिको बिशेषतानै हो ।
हारमा प्रश्न उठछन , जितमा रमाउछन यो सामान्य कुरा हो । अहिले टिम छनोट नभएको अबस्थामा त्यो खेलाडीसगै सबैमा पिडा बोध भएको छ ।
सबैको ईक्छा हुन्छ आफ्नो टिममे जितोस , यसपटक अझ नेपालीमा धेरै थियो । त्यसैले पिडा अलि बढी महशुश गरिरहेका छन ।
फेरी त्यही कुरा आउँछ नेपाल कसरी हार्न सक्छ । त्यतिकै हारिदैन होला , हारमा बिपक्षी ससक्त हुनु पर्यो । त्यो विपक्षीमा देखियो । नेपाल कमजोर सावित हुँदा आफुलाई प्रमाणित गर्दै सिगांपुर छनोट हुँन पुग्यो ।
उच्च मनोबलमा रहेको नेपाललाई पहिलो खेलमै कतारले राम्रो झट्का दियो । लागेको थिएन कतारले नेपाललाई १ सय २२ रनमा रोक्छ | तर दुभाग्य भयो त्यस्तै यहाँ कतारलाई कमजोर पक्कै मानिएको होईन ।
तर नेपाल कतारसँग ४ विकेटले पराजित हुँन पुग्यो | यहि बाट नेपालको उल्टो गति त् चलेको होईन , तर नेपालले दोस्रो खेलमा मलेसिया जुन प्रतियोगितामा कमजोर टिम मानियो त्यसलाई बर्षाले प्रभावित गरेको खेलमा ७ विकेटले पराजित गर्यो | जसमा मल्लले राम्रो ब्याटिङ गरेका थिए |
यसपछी नेपालले कुबेतलाई शानदार ७ विकेटले पराजित गर्यो । कुबेत त्यहि टिम थियो जसले नेपाललाई पिडा दिएको कतारलाई पराजित गरेको थियो । त्यस्तोमा नेपाललाई कतारबिरुद्दको खेलको मनोबैज्ञानिक पिडा भुल्ने अबसर जुरेको थियो ।
र थप टिममा गुमेको उर्जा आएको थियो । जसको निरन्तरता सिगांपुरसगको खेलमा नेपाल दिन चाहान्थ्यो तर यस्तो हुँनलेखेको रैनछ दिन सिगांपुरको रहेछ ।
यसरी हेर्दा टिमले धेरै ठुलो अबसर गुमाएको भएपनि सदैभ हामिलाई खुशी दिने क्रिकेटलाई अझ हाम्रो हौसला प्रदान गर्ने समय रहेको छ । खेलाडीप्रति सम्मान गर्न जरुरी छ खुशीमा त् सबैले साथ् दिन्छन दुख र पिडामा पूर्ण साथ् दिनुनै एक सँचा समर्थक हुँन सक्छ । र त्यो सँचा समर्थकमा यहाँ हरु पनि एक हो हामीलाई विश्वास छ ।
समग्रमा नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेरनै नेपालले यो परिणाम पाएको हो । जसमा खेलाडीनै अल्लमल्ल , कुन खेलाडी कहाँ गएर खेल्ने अहिले सम्म टुंगो लगाउन सकिएको छैन । बारम्बार प्रयोग गरिएको छ , सफल हुँदैन फेरी परिवर्तन गरिन्छ । समयको माग र बिपक्षीको अबस्था र खेलको अबस्थालाई परिवर्तनमा भने गर्न गरिन्छ | यस्तो भएन हाम्रो मुख्य कुरा स्थानमा असफल भएपछी अर्को स्थानमा राम्रो गर्छ भन्नेमा बित्यो ।
चाहे त्यो ओपनिग होस् या यसपछीका क्रममा त्यो बारम्बार देखियो । अन्तत नेपालले लामो समयपछी कप्तान पारस र मल्ललाई ओपनिग जोडीको रुपमा पाएको छ । अब हेर्न बाकी रहेको छ यो जोडीले कहिले सम्म चलन्छ । सम्भावानाभने राम्रो देखाएका छन ।
यसपछी यस प्रतियोगितामा अर्को खड्किएको कुरा एक या दुई खेलमा टिम निर्भर रहेको त्यो प्रष्ट देखियो भने बलर अझ् बिशेष आशा गरिएका बलरले टिमलाई न्याय गर्न नसक्नु पनि एक कारण मध्ये एक हुन् सक्छ ।
यावतकुरा हुदाँ हुदै यस प्रतियोगिताले नेपाललाई धेरै सिकायो । कुनैपनि प्रतियोगितालाई सामन्य रुपमा लिन हुदैन । बिगतको ईतिहास भन्दा पनि बर्तमानलाई हेरर खेल्नु पर्ने रहेछ । कमि कमजोरीबाटै सबैले सिक्ने हो , अब नेपालले आफ्ना कमि कमजोरीलाई सुधार्दै आगामी दिनमा अझ राम्रो गर्ने सोचका साथ अघि बढ्नु आबश्यक छ ।
Previous Postटी – ट्वान्टी विश्वकप नेपालले फेरी गुमायो ! सिगांपुर ग्लोबल क्वालिफायरका लागि छनोट
Next Postक्यानभास ईन्डोर स्कुल क्रीकेट प्रतियोगिता : पहिलो दिन , ६ खेल समापन